'အိမ်ထဲရှိလူတိုင်းတွင် ED ရှိကြသည်' - ကျွန်တော်တို့ဟာ GREEKRANK ရဲ့အဆင့်သတ်မှတ်ချက်တွေအကြောင်းပြောဖို့လိုတယ် - နှုန်းထားများ
'အိမ်ထဲရှိလူတိုင်းတွင် ED ရှိကြသည်' - ကျွန်ုပ်တို့သည် GreekRank အပေါ်တွင်ဖော်ပြချက်များနှင့် ပတ်သက်၍ ပြောဆိုရန်လိုအပ်သည်
အခွင့်အလမ်းတွေကိုသင်ဂရိဘဝ၌ရှိကြ၏လျှင်သို့မဟုတ်သင်အစဉ်အဆက်အလျင်စလိုစဉ်းစားပါတယ်လျှင် GreekRank မှတဆင့် skimming အနည်းဆုံးစုံတွဲတစ်တွဲမိနစ်ကုန်ရပြီနေကြသည်။ ဒီ site ကိုမစစ်ဆေးဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုအကြိမ်ကြိမ်ပြောခဲ့ပေမဲ့တစ်နည်းနည်းနဲ့တော့ရှိနေတုန်းပါ။ ဒရာမာဇာတ်လမ်းတွဲတွေ၊
ဒါဟာကောင်းမကောင်းနှင့် CU frats ၏လိုက်တယ် ratings ၏အကျဉ်းချုပ်နှင့်အတူက (အားလုံးအဆိုးဆုံးအဆိုးဆုံး) အဘယျသို့ဖော်ထုတ်ခဲ့သည်အချိန်အကြောင်းကိုပါပဲ။
ကောင်းမွန်သော 'ပတ်ပတ်လည် classy mofos ။ '
The Bad: 'ဒါကအက်ဒီဆင်ရဲ့စံပြကုလသမဂ္ဂပါ။ သူတို့၏ဂုဏ်သတင်းသည်သူတို့ရှေ့တွင်ရှိသည်။ '
အဆိုပါထူးဆန်း: မကြည့်နဲ့၊ ငါကြည့်ပါ၊
ကောင်းမွန်သော “ ဒီလူတွေအရမ်းအေးတာပဲ၊ သူတို့သည်မြန်မြန်ဆန်ဆန်ကြီးထွားလာပြီးစာသင်တိုင်းတွင်ပိုမိုကောင်းမွန်လာကြသည်။ ကောင်းမွန်သောအလုပ် AEPi '
The Bad: 'ဒီလူတွေဟာလုံးဝပြီးပြည့်စုံမှုမရှိဘူး'
The Bad: ပါတီပွဲတစ်ခုမှာ pop tarts လုပ်ဖို့ငါ့ကိုထုတ်ပစ်လိုက်တယ်။ Goobers …သူတို့အားလုံး '
အဆိုပါထူးဆန်း: '' သူတို့ကတစ်ချက်မှာဘဲရှိခဲ့တယ်။ ထိပ်တန်းအိမ်။ '
ကောင်းမွန်သော 'ဖြစ်ကောင်းကျောင်းဝင်းအပေါ်ငါ့အကြိုက်ဆုံးရဲဘော်အချင်းချင်းသွေးသောက်စိတ်ထားတစ်ခု။ ယောက်ျားတွေကလူတိုင်းကိုကြိုဆိုပြီးအနည်းဆုံးပြောဖို့အရမ်းပူတယ်။
The Bad: 'boners နှင့် douche တစည်း' '
အဆိုပါထူးဆန်း: 'ကျောင်းဝင်းထဲမှာအကောင်းဆုံး sorority'
ကောင်းမွန်သော '' သူတို့ကမိန်းကလေးတွေကိုအရမ်းလေးစားတယ်။ Beachapalooza တော်တော်များများသူ့ဟာသူပြောသောငါအစဉ်အမြဲငါဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့အကောင်းဆုံးပါတီ။ ''
လာမည့်အပတ်က preron များဂိမ်း
The Bad: မင်းကြည့်ရတာရယ်စရာကောင်းလွန်းလို့မင်းလမ်းကထွက်သွားပါ။
ကောင်းမွန်သော '' ဖိစီဆီသွားတဲ့အခါငါအမြဲပျော်တယ်။ ယောက်ျားတွေကချစ်စရာကောင်းပြီးပါတီပွဲတွေလုပ်ကြတယ်။ '
The Bad: သခင်ယေရှုသည် ပို၍ ခက်ခဲသောဖိစီးမှုများကိုပြုလုပ်သည်။
ကောင်းမွန်သော ကျောင်းဝင်းအပေါ် '' အကောင်းဆုံးရဲဘော်အချင်းချင်းသွေးသောက်စိတ်ထား။ ဒီလူတွေကဘယ်လိုပစ်ချရမလဲ၊ ပျော်စရာကောင်းတဲ့အချိန်တွေသာမကဘဲ class ည့်သည်တွေကိုဂရုစိုက်ဖို့လိုတယ်။
The Bad: အရှုံးသမား။ dope အိမ် Tho '
ကောင်းမွန်သော 'ကြည့်ကောင်းတဲ့လူကြီးလူကောင်း! သူတို့ပျော်ဖို့ဘယ်လိုလုပ်ရတယ်၊
The Bad: တခြားအိမ်တွေကနေပယ်ချခံခဲ့ရတဲ့ကလေးတွေကိုလေလံပေးခဲ့တယ်။
အဆိုပါထူးဆန်း: '' ရည်းစားပစ္စည်း ''?! မင်းငါ့ကိုနောက်နေတာလား? တကယ်ကြောက်မက်ဖွယ်အသံ။ ''
ကောင်းမွန်သော 'ဒီလူတွေကအရမ်းကောင်းတယ်။ အမြဲလေးစားပြီးအထွက်၊
The Bad: ဝေးလံခေါင်ဖျားနေသောအိမ်ငယ်လေးတစ်ခုတွင်နေထိုင်သောနွေးထွေးသောအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့အတွက်အတ္တကြီးလှသည်။ ''
အဆိုပါထူးဆန်း: '' အိမ်မှာယောက်ျားတိုင်း ED ရှိပါတယ်။ သို့သော်သူတို့သည်အလွန်နားထောင်သူများဖြစ်ကြသည်။ အသက်ရှင်သောပိုင်အဖုံး '
ကောင်းမွန်သော 'ယောက်ျားတွေကအရမ်းပူတယ်၊ ကျောင်းဝင်းရှိကျွန်ုပ်အကြိုက်ဆုံးအိမ်
The Bad: '' ဒီနှစ်ကျရင်ဒီနှစ်ကျရင်ကျိန်းသေပေါက်ရောက်သွားတာကိုသူတို့လိုချင်သလိုမကောင်းဘူး ''
အဆိုပါထူးဆန်း: 'ငါ့ကလေးဖေဖေကဒီမှာညီလေးတစ်ယောက်ပါ။ သူ့ကလေးငယ်လေးကိုမထောက်ခံဘူး။ Tho အရူးမဟုတ် ... ကောင်လေးတစ်ယောက်ကိုပြုစုပျိုးထောင်တာထက်ပိုကောင်းအောင်လုပ်တာကပိုအရေးကြီးတယ် :) '
ကောင်းမွန်သော ချစ်ခြင်းမေတ္တာ ညီအစ်ကိုအားလုံးကအရမ်းပျော်ဖို့ကောင်းပြီးကြိုဆိုကြတယ်! '
The Bad: 'အေးအေးဆေးဆေးကလေးငယ်နှစ်ယောက်စုံထားပါ၊
အဆိုပါထူးဆန်း: 'ယောက်ျားတစ်ယောက်တွင်တွေ့ဖူးသမျှအနည်းဆုံး Dick ive'
ကောင်းမွန်သော '' များစွာသောလူများနှင့်အတူကြီးမားပါတီများ။ ဂရိတ်ကောင်လေး / မိန်းကလေးအချိုး။ ပါတီပွဲကျင်းပရန်ကျွန်ုပ်အကြိုက်ဆုံးနေရာဖြစ်သည့်အတွက်အမြဲတမ်းအချိန်ကောင်းဖြစ်သည်။ '
The Bad: 'အမှိုက်ပုံး။ သူတို့ကရဲဘော်အချင်းချင်းသွေးသောက်စိတ်ထားရှိကြတာမဟုတ်ဘူး။ '
အဆိုပါထူးဆန်း: 'ငါကျန်တစ်သက်တာကိုဆမ်ပတ်နားမှာတစ်စက္ကန့်လောက်ကုန်ဆုံးတာထက် Paul Blart Mall Cop ကြည့်ဖို့အတင်းအကျပ်ဖိအားပေးခံရတာ'
The Bad: အိမ်ကအပြင်ဘက်ကကြည့်လို့ကောင်းပေမယ့် ၀ က်ခြံကဝက်သားလိုပဲ။ မခိုင်မာတဲ့ညီအစ်ကိုအသင်းအပင်း။ ဟုတ်တယ်၊ ပါတီတွေရှိတယ်။ လူတိုင်းပါတီများကပါတီများရှိပါတယ်။ ''
အဆိုပါထူးဆန်း: 'Sigma pi သည်ယောက်ျားတစ်ယောက်ကိုစီးသည်'
ကောင်းမွန်သော '' ကောင်းတဲ့ညီအစ်ကိုအသင်းအပင်း၊ ယောက်ျားတွေကတကယ်ကိုရင်းနှီးတယ်လို့ငါပြောနိုင်တယ် '' သူတို့ကပျော်စရာလူမှုရေးဖြစ်ရပ်များရှိသည်။ စုစုပေါင်းလူကြီးလူကောင်း, သူတို့ကိုငါစိတ်နှလုံးအကြွင်းမဲ့ယုံကြည်ပါတယ်။ ''
The Bad: 'တည်ရှိမှုမရှိသောအရူးမခံပါနှင့်'
အကောင်း ဖြေ - တောင်ကုန်းပေါ်မှာရှိတဲ့အကောင်းဆုံးယောက်ျားလေးတွေသူတို့ဘယ်လိုပစ်ချရမယ်ဆိုတာသိကြတယ်။ aspen အတွက်သူတို့ရဲ့နောက်ဆုံးတရားဝင် Unreal ဖြစ်ခဲ့သည်နှင့်သင်သူတို့ထဲကတ ဦး တည်းကိုမသွားဘူးဆိုရင်သင်ကောလိပ်ကျောင်းမှားနေပါတယ်။ အဆိုပါမြင့်တက်အမှန်တကယ် ''
The Bad: Theta တိရိစ္ဆာန်ရုံကငါရှိခဲ့တဲ့အကောင်းဆုံးပါတီပဲ။ ဒီပါတီထိပ်တန်းမိန်းကလေးတွေတောင်မှမတက်ခဲ့ဘူးစို့နှင့်ထိုအရပ်၌ရှိမိန်းကလေးများသူတို့လာအဖြစ်အမြန်ထွက်ခွာသွားခဲ့သည်။ ''
ကောင်းမွန်သော '' ဒီမှာယောက်ျားတွေအမြဲကောင်းတဲ့ဖြစ်ကြသည်။ လုံခြုံစိတ်ချရသောပတ်ဝန်းကျင်ဟုခံစားရသောကြောင့်ဒီကိုသွားရန်စိတ်မလှုပ်ရှားပါနှင့်။ ပျော်စရာပွဲတွေလည်းရှိတယ်။ '
The Bad ZBT ကရိုးရိုးသားသားပြောတာပဲ။
အဆိုပါထူးဆန်း: 'Sup Bros! သင်၏ပိုကီမွန်ကုန်းပတ်အနည်းငယ်ပျော့ပြောင်းနေပါက ZBT သို့လာရောက်ပါ။ သင့်တွင်နောက်ဆုံးပေါ်ကတ်များကိုသင်ကြည့်ရှုနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ မိန်းကလေးများခွင့်မပြုပါ။ သာ Bros ။ '
ဒီမှာသင်ခန်းစာလား။ GreekRank ကရက်စက်တယ်၊ အင်တာနက်ကတွင်းနက်ကြီးတစ်ခုငါဒီဝက်ဘ်ဆိုက်မှာအချိန်အများကြီးကုန်နေတယ်။